Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Xoojinta safarka ku habboon cimilada ee eber
Jebinta Wararka Yurub • Wararka Jabhada Malta • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Safarka cimilada-saaxiibtinimo ee Zero
Iyada oo Yurub ay tahay hogaamiye caalami ah Safarka & Dalxiiska, SUNx Malta waxay ku dhawaaqeysaa laba dadaal oo lagu caawinayo soo dhaweynta dib u soo kabashada aafada ee gobolka iyo ka jawaabida Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Guterres oo ku baaqaya in dhammaan dalxiisyada safka faafa ay ahaadaan kuwo waara oo Cimilada saaxiibtinimo leh.
SUNx Malta waxay ka shaqeyneysaa sidii loo xoojin lahaa waxqabadka cimilada Yurub.
Marka hore waa Is-faham SDG 17 oo Is-faham ah oo lala yeeshay Guddiga Socdaalka Yurub (ETC), oo matalaya Hay'adaha Dalxiiska Qaranka (NTOs) ee Yurub, si ay uga wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa Safarka saaxiibtinimo ee Cimilada ee xubnaha ETC qorshooyinka istiraatiijiyadeed.
Tani waxay ka caawin doontaa iyaga inay mudnaanta siiyaan horumarka waara ee Yurub inay noqoto meel dalxiis.
Tani waxay sidoo kale ku jiri doontaa wada shaqeyn gaar ah iyada oo loo marayo SUNx Cimilada Diiwaangelinta Safarka Saaxiibtinimada leh ee loogu talagalay 2050 Hammiyo oo ah waxay ka caawiyaan NTO-yada Yurub inay horumariyaan istiraatiijiyadooda u adkaysiga Cimilada.
Ta labaad waa magacaabista "Ergeyga Cimilada ee Xooggan - Yurub" si loo xoojiyo diiradda la saarayo siyaasadaha, sharciyada iyo hay'adaha ka socda gobolka oo si dhakhso leh isu beddelaya iyo in laga caawiyo Jaaliyadaha iyo Dalxiisyada Dalxiiska & Shirkadaha inay si wanaagsan ula shaqeeyaan Diiwaanka CFT. Cinzia De Marzo, oo dhowaan loo magacaabay Danjiraha Cimilada ee EU, waa qareen khibrad leh, oo ka soo shaqaysay Guddiga Yurub sida qareen, mas'uul ka ah Tilmaamayaasha Dalxiiska Yurub ee Joogtaynta (ETIS) waxay aqoon iyo khibrad badan u leedahay booska. Doorkeeda cusub waxay si dhow ula shaqeyn doontaa hay'adaha EU si ay u taageeraan Qorshaha Cagaaran ee Qaybta Safarka & Dalxiiska.
Waxay sidoo kale la xiriiri doontaa daneeyayaasha yurub diiwaanka UNFCCC ee u hogaansan SUNx Malta CFT Diiwaangelinta iyo qalinjebinta Kulliyadaha Cimilada adag, si ay uga caawiso xoojinta Barnaamijyada Safarka saaxiibtinimo ee Cimilada.
Professor Geoffrey Lipman SUNx Malta Madaxweynaha ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno xoojintaan cusub ee Yurub, anagoo ka mid ah hogaamiyaasha horumarka dhaqan-dhaqaale ee adduunka. Waxay si gaar ah muhiim u tahay inaan taageerno ETC oo leh hoggaan dheer oo ku saabsan cagaarka qaybta. Cinzia waxay keenaysaa awood dheeri ah oo muhiim ah awooddeena dabka. ”
Eduardo Santander, Agaasimaha Fulinta ee ETC ayaa yiri: “Yaraynta cimilada ayaa ah mid ka mid ah ahmiyadaha muhiimka ah ee xubnaha ETC iyada oo qayb ka ah soo kabashada cagaaran iyo waarta ee waaxda dalxiiska wixii ka dambeeyay COVID-19. Waan ku faraxsanahay inaan lashaqeyno SUNx Malta oo aan aaminsanahay in Diiwangalinta Safarka Cimilada ee Saaxiibtinimada ah ay tahay qalab waqtigiisa ku habboon oo waxtar leh kaas oo ka taageeri doona NTO-yada Yurub si ay u gaaraan himilooyinkooda cagaaran ee joogtaynta. ”
Ku saabsan SUNx Malta
SUNx Malta maahan mid macaash doon ah, waxay ku saleysan tahay EU, hay'ad, waxay la shaqeysay dowladda Malta oo abuurtay nidaam qaali ah, qiimo jaban, oo ka caawiya shirkadaha Safarka & Dalxiiska iyo jaaliyadaha inay u beddelaan Dhaqaalaha Cimilada Cusub. The SUNx Malta "Nidaamka Safarka Cimilada & Nadiifka ah, Cimilada ah" waa waxqabadka iyo waxbarashada oo diirada la saaray - taageerida shirkadaha maanta iyo jaaliyadaha si ay u gaarsiiyaan himilooyinkooda la shaaciyay iyo dhiirigelinta hogaamiyaasha dhalinyarada berrito si ay ugu diyaar garoobaan shaqooyinka abaalmarinta leh ee qeybaha.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee saxaafadda ah, sawirrada, ama si aad u diyaariso wareysiyo lala yeesho Professor Lipman, la xiriir Olly Wheatcroft, Maamulaha Barnaamijka SUNx Malta: [emailka waa la ilaaliyay]
Shirkadda Baabuurta ee Ford waxay ku sharfaysaa BorgWarner Adduun ...